Iron | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
ndiudzei nezvekadhi revhidhiyo? AMD RADEON HD 7480D
Tiudze nezve kadhi revhidhiyo? AMD RADEON HD 7480D isina kusimba vhidhiyo kadhi Iyo amd radeon hd 7480d vhidhiyo kadhi iri isina kusimba vhidhiyo kadhi. Zvakanaka, hongu hazvisi zvemitambo, zvekungovhura internet uye zve ...
Hapana hunoikorofoni inobatanidza mu laptop, ndine laptop laptop Lenovo
Laptop haina maikorofoni yekubatanidza, ini ndine Lenovo laptop, zvinoenderana nekuti ndeipi laptop, pamwe iwe une headset yekubatanidza mune imwe wiring uye mahedhifoni uye maikorofoni, ini ndinayo pa ...
Haikwanisi kupinda Safe Mode muWindows 8 via fxnumx nei?
Ini handikwanise kupinda Safe Mode muWindows 8 kuburikidza neF8 nei? Iwe unofanirwa kumanikidza shift + F8 Uchishandisa iyo "Windows Startup Sarudzo" skrini (yaimbove "Advanced Boot Sarudzo"), unogona kutanga Windows mu ...
Ndinokwanisa kuisa 2 kadhi yevhidhiyo here?
Ini ndinogona kuisa maviri evhidhiyo makadhi? Iwe une 2 slots yekadhi revhidhiyo, kubheja, asi zvinodikanwa kuti makadhi acho akafanana muchimiro cheiyo kernel, ndiko kuti, zvinokurudzirwa kuwana iyo yakafanana kadhi se ...
Nzira ipi yekugonesa iyo yakavakwa-in account account?
Ini ndinogonesa sei yakavakirwa-mukati manejimendi account? edza - Unogona kupinda mune ino sisitimu iri pasi peAccountator account, iyo inofanira kutanga yagoneswa. Kutanga rairo yekuraira nekutaipa cmd mu Mhanya mirairo bhokisi. Mune yakavhurwa ...
Ndiudzei kuti ndingagadzira sei kombiyuta yemitambo ye 15000 rubles. Ndatenda mberi
Ndiudze kuti unganidza sei komputa yemitambo ye15000 rubles. Ndatenda kumberi Kune iyo mhando yemari, unogona kuvaka isingadhuri sisitimu iyo inodhonza mitambo mizhinji pane yepakati magadziriso. zvakakwana kana pakutanga paine ...
GeForce GTX 660M kadhi yevhidhiyo ine simba yakakwana?
Iyo GeForce GTX 660M ine simba rakakwana kadhi yemifananidzo? Ndine zvakafanana pabeche. 1: 1 inoshanda sekombuta yenguva dzose. FPS haina kuchinja mumitambo. Iyo kadhi ine simba kwazvo, asi yakawanda uye ...
Kubatanidza kunotonhorera kuburikidza nemagetsi
Kubatanidza inotonhorera kuburikidza nerubatsiro rwemagetsi, tora chero inotonhorera, cheka chinongedzo kubva pairi uye kana uchida kuti ishande pa100%, dhuma waya mumudziyo b. nezvimwe - nhema kusvika nhema ...
Netbook inodzora - zvekuita ???
Netbook inodzora - zvekuita ??? Yokutanga ndeyekuchenesa iyo laputopu neCCleaner, kubvisa zvisina kufanira kutangisa mitoro pakombuta, uye chechitatu kutarisa mavhairasi Chiremba Web Healing utility Dr. Web CureIt! Dzorerazve windows (kunyanya yakachena windows ...
ZVAKADZIDZWA kupi kuti uwane pini 8 yekadhi yevhidhiyo?
YAKADZIDZWA kupi kwekutora iyo 8 pini yevhidhiyo kadhi? iwe unoda 2-pini molex (x8) adapter uye zvese zvinoshanda.Kana chinobatanidza-pini nhanhatu chinokwana zvakasununguka muchisere-pini socket, chivhara mukati ugoitanga ...
Video card! Ndiudze, ndeye NVIDIA GeForce GT620 2GB yakanaka kumitambo ye2012 yegore?
Kadhi reVhidhiyo! Iyo NVIDIA GeForce GT620 2GB kadhi yemifananidzo yakanaka yemitambo ya2012? Ahhahahahahaha, asassin yako haizoputika kubva pakakwirira pa100%, zvakanaka, ngatitii kadhi rakanaka kana rakaipa kwauri ...
Ndekupi kwaungabatanidza fan fan?
Ndekupi kwekubatanidza iyo kesi fan? kana fan fan ichibvumidza iwe kunamatira kune mamaboardboard, ona mhinduro iri pamusoro. kana zvisina kudaro, batanidza iyo 1,2-zvinongedzo kune magetsi emagetsi yeyunobatanidza inotonhorera. 3- socket yepurosesa ...
mahwindo akawana zvakaoma zvinetso zvekutya
windows yakaona yakaoma dhisiki matambudziko kazhinji, zvakanyatso kurongeka ku "chkdsk c: / f / r" kumhanya cheki uye ndizvozvo. kana paine yakaderera-chikamu fomati glitches zvakare (mhdd ndiyo yandinofarira, asi haisi ...
Core 2 Quad Q8300. Ndinofanira kutenga purogiramu yakadaro yemitambo here?
Core 2 Quad Q8300. Unofanira kutenga processor yakadaro yemitambo here? Yakajairika processor. Mitambo yakanyatsogadziridzwa yequad cores muWindows 7. Asi muWindows XP yakatonyanyisa. Zvirinani kutora ...
Ndekupi kwaungaona shanduro yekufambisa yemakadhi ako evhidhiyo?
Ndekupi kwandingaone iro dhiraivha vhezheni yevhidhiyo kadhi rangu? Control Panel - System - Hardware - Dhijitari Maneja - Vhidhiyo adapta (tinya kaviri) - Mutyairi Dhawunirodha uye gadza Everest chirongwa (EVEREST Yekupedzisira Edition ...
Maongororo ako pane dell laptops
Wako ongororo yemadell laptops haatore chaizvo iyo asus Dell malaptop ane mhando yepamusoro kwazvo. Kunyanya kukosha, Dell Hardware inokurumidza uye zvirinani kupfuura mamwe ese emalaptop brand. Semuyenzaniso,…
Ndiyo nvidia GeForce GT 440 video kadhi yakanaka here?
Iyo nvidia GeForce GT 440 yakanaka vhidhiyo kadhi? NVIDIA GeForce GT 440 inopa vashandisi zvisati zvamboitika uye huwandu hunoshamisa hwehuwandu mune mavara, nharaunda nenzvimbo dzemitambo mumitambo yanhasi inozivikanwa ...
Chii chinogona kuputsa mu calculator? inoda kuparara kwakakomba mu calculator kuti inyore teknolojia yekare
chii chinogona kutyora mu Calculator? kuputsika kwakati wandei kunodiwa mu Calculator kunyora tekinoroji yekare Makiyi akadonha, alum yakatsva, bhodhi rakatsemuka, bhatiri rakaburitsa oxidized bhodhi, iro skrini rakatsemuka. Kutsemuka uye kutsemuka ...
Kadhi yemavhidhiyo iri kupi palaptop? Mifananidzo mukati. Ndiri kuda kusimudzira. Ndeipi kona uye ipi?
Iripi kadhi yemifananidzo iri mulaptop? Mufananidzo mukati. Ini ndoda kukwidziridza. Iko kona uye divi ripi? Lonely Vanilla Bear, urikuti here iyo vhidhiyo chip inotengeswa kubhodhi uye ne ...
Zvinorevei kuti "Graphics controller mhando - discrete uye yakavakirwa-mukati" zvinorevei?
Zvinorevei kuti "Rudzi rwegrafiki controller - rakasarudzika uye rakavakirwa" Rakavakirwa-mukati - rakabatanidzwa mubhodhi reamai Discrete - vhidhiyo kadhi. Ini zvakare ndatenga beech uye yakasanganiswa vhidhiyo kadhi, asi zvakazoitika kuti yakabatanidzwa-yakavakirwa-mukati, saka ...
peji 1 peji 2 ... peji 39 Next Page
Mibvunzo ye115 mu database yakagadzirwa mu 32,178 masekondi.